Lenovo Miix 630, azịza ndị ọzọ enwere ike iji aka ya kwụrụ ụgwọ Akụkọ akụrụngwa
Lenovo Miix 630, azịza ndị ọzọ enwere ike iji aka ya kwenye
Ofwa nke laptọọpụ na smart ekwentị ga-enwe ọhụụ ọhụrụ n'afọ a 2018. The ikpo okwu "Mgbe niile na mgbe niile" nwere ọtụtụ ndị ọzọ. Onye ikpeazụ isonyere bụ nke ụlọ ọrụ China bụ Lenovo gosipụtara, ya Lenovo Miix 630.
Laptọọpụ a ga-enwe ihe eji arụ ọrụ na mobiles - njedebe dị elu, n'ezie - ma kwupụta nnwere onwe site na ndị nkịtị n'ọhịa laptọọpụ. N'ebe ọwụwa anyanwụ Lenovo Miix 630 bụ kọnvatịbụl enwere ike iji ya dị ka mbadamba nkume ma ọ bụ laptọọpụ ekele maka keyboard nke etinyere na ngwugwu ahịa.
Nhazi ya bu yiri nnọọ ihe anyị nwere ike ịchọta na ụdị Microsoft Surface dị iche iche; nke ahụ bụ, anyị ga-enwe ntụgharị nke enwere ike ịgbakwunye mkpụrụedemede magnetized (gụnyere ya na ọnụahịa ahụ) nke ahụ ga - enyere anyị aka ịrụ ọrụ nke ọma na nkenke oge niile. Ọzọkwa, na ngwungwu ahịa a, a na-agbakwunyekwa pensụl stylus yabụ ịnwere ike iji kọmpụta Lenovo gị dịka akwụkwọ ndekọ dijitalụ na ịkọwa ihe na nzukọ. Ma ọ bụ, rụọ ọrụ na akwụkwọ PDF.
Ka ọ dịgodị, na nkọwa nke Lenovo Miix 630 anyị na-ahụ Qualcomm Snapdragon 835 processor -Ha ekpebighi itinye Snapdragon 845 model-, nke a ga - esonyere ya nke RAM ruru 8 GB na ebe nchekwa dabere na nkeji SSD rue 256 GB.
Mana, ikekwe, ihe ga-eju onye ọrụ ahụ anya bụ nnwere onwe nke laptọọpụ a lekwasịrị anya na njem dị ọcha nwere ike nweta: dịka ọnụ ọgụgụ sitere na Lenovo, ụdị a nwere ike iru awa 20 nke ọrụ na-agbasaghị na otu ụgwọ.
Na ikpe azu, ihuenyo nke Lenovo Miix 630 a nke nwere onu ogugu nke 12,3 sentimita asatọ na mkpebi ya bu WUXGA + (1.920 x 1.280 pixels). Windows 10 S Ọ bụ sistemụ arụmọrụ na laptọọpụ ndị a niile ga-ebu n'elu ikpo okwu na ọnụ ahịa ya ga-abụ 799,99 dollar - Na ntụgharị a na-emebu, anyị ga-ahụrịrị etu ọnụahịa ya si kwụrụ euro 800 - ọ ga-erekwa na ọkara nke abụọ nke afọ a bụ 2018.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Laptọọpụ » Lenovo Miix 630, azịza ndị ọzọ enwere ike iji aka ya kwenye
A na-edozi igbe Galaxy S9 na nkọwa niile nke Samsung Samsung ọhụrụ
OnePlus 6 nwere ụbọchị ntọhapụ